နာမက္ခရဗေဒ | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
နာမက္ခရဗေဒ	# ယနေ့ မွေးဖွား ရင်သွေးများ (Today’s Born Babies)Published December 3, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in နာမက္ခရဗေဒ, မဟာဘုတ်, ဟူးရားဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင်, စက်တင်ဘာလ, နာမက္ခရ ဗေဒင်, မဟာဘုတ် ဗေဒင်, ဟူးရား ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	၉ ဂဏန်း နှင့် နာမည်ကျော်ကြားသူများPublished February 26, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	၉ ဂဏန်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် အာရှနိုင်ငံ အတော်များများမှာ အတော် ရေပန်းစားတဲ့ ဂဏန်းဖြစ်ပါတယ်။ “၉ န၀င်း” ဆိုတဲ့ စကားဟာ “မြန်မာ့ဂမ္ဘီရ လောက” မှာ အတော်ရေပန်းစားတဲ့ စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ “၉ န၀င်း အဓိဌာန်” တို့၊ “၉ န၀င်း မိုးအလင်း” တို့၊ “၉ န၀င်းစီး ယတြာ“ တို့၊ “၉ န၀င်းသင်္ချိုင်း သံဒါး”တို့ “၉ န၀င်း ထွက်ရပ်လမ်း”၊ “၉ န၀င်း ဆေးတော်ကြီး” “၉ မြို့ရှင်၊ ရွာတော်ရှင်” . . “၉ တိုင်း ၉ ဌာန” “တြိစက္က ကိုးန၀င်းဇာတာ” တို့ဆိုတာ ပုတီးလိုင်း၊ ဗေဒင်လိုင်း၊ ဂမ္ဘီရလိုင်းက ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက် နားမစိမ်းကြပါဘူး။
Posted in ဂမ္ဘီရ, နာမက္ခရဗေဒ, သင်္ချာဗေဒ | Tagged burmese horoscope, mahabote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, သင်္ချာဗေဒ, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 18 Comments	# နာမည်တို့၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များPublished November 10, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in နာမက္ခရဗေဒ | Tagged mahaboke, MaHaBote, Myanmar Astrology, နာမည်တို့၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ, ယိချင်း, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# အကြွေစောတဲ့ “ပက်ထရစ် ဆွေဇီ”Published September 15, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	ယနေ့ နံနက် သတင်းထဲမှာ ကမ္ဘာကျော် “Ghost” ဇာတ်ကားနဲ့ နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ မင်းသား “ပက်ထရစ် ဆွေဇီ” တစ်ယောက် ကွယ်လွန် သွားရရှာပါပြီ။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ သူဟာ မမျှော်လင့်ဘဲ အသတ်ခံ လိုက်ရလို့ “တစ္ဆေဘ၀” ကို ရောက်သွားပြီး“ကောင်းမှု နဲ့ မကောင်းမှု” တို့ရဲ့ အားပြိုင်မှုကို လူသားတွေ သံဝေဂ ရအောင် ရိုက်ကူးသွားလို့ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်ကား တစ်ကားပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတွေကဘဲ TV-5 ကနေ “Ghost” ဇာတ်ကား ပြန်လာလို့ ကြည့်လိုက် ရပါသေးတယ်။ အခုတော့ သူ တစ်ကယ် ကွယ်လွန်သွားရ ရှာပါပြီ။
မင်းသား “ပက်ထရစ်ဆွေဇီ” ကို 1952 ခုနှစ် သြဂုတ်လ (18) ရက်နေ့မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ Texas ပြည်နယ် Houston မြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ယခု သူကွယ်လွန်ချိန်မှာ အသက် (57)ပြည့်ပြီး (58) ထဲကို ၀င်ရောက်လာချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့ရိုးရာ မဟာဘုတ် သက္ခတ်မှာတော့ “အင်္ဂါသက္ခတ်” ထဲမှာ ရောက်နေ ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ စနေ သက္ခတ်တွေဟာ မကောင်းတဲ့ သက္ခတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့် ပို့စ်ထဲက “ဒုက္ခပေးတဲ့ အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ စနေ” ဆောင်းပါးမှာ ပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ် ဘယ်သက္ခတ်ထဲ ရောက်နေတယ် ဆိုတာကြည့်ချင်ရင်တော့ “သက္ခတ်အလွယ်ကြည့်နည်း နှင့် ယတြာများ” ကို Download လုပ်ပြီး ဖတ်ကြည့် နိုင်ပါတယ်။
သူဟာ မဟာဘုတ် အကြွင်းဖွားအရ (၀)ကြွင်းဖွားဖြစ်ပြီး တနင်္လာ (သိုက်ဖွား) ဖြစ်ပါတယ်။ ယခု ရောက်ရှိနေတဲ့ “အင်္ဂါ” သက္ခတ်ဟာ နဂိုကတည်းက ဒုက္ခ ပေးတတ်တဲ့ ဂြိုဟ်ဖြစ်တဲ့အပြင် မဟာဘုတ်ခွင်မှာ “မရဏ” ခွင်မှာ ရှိတဲ့ဂြိုဟ်ဖြစ်လို့ ဆိုးအား ပြင်းထန်ပါတယ်။ အောက်က မဟာဘုတ်ခွင်ကို ကြည့်ပါ။
လူသားတွေကို ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ “အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ စနေ” ဂြိုဟ် (၃)လုံးရှိတဲ့အနက် (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် သမားတွေမှာ စနေ(၀) နဲ့ အင်္ဂါ (၃) တို့ဟာ “ဘင်္ဂ” နဲ့ “မရဏ” ဌာနမှာ ရှိကြလို့ ခံစရာရှိရင် အခြားအကြွင်းဖွားတွေထက် ပိုခံရတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် 1962 နှစ်ခု ဧပြီလ ဖွားဖြစ်လို့ (၀) ကြွင်းသမားဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဘ၀မှာ ကျန်းမာရေး အသည်းအသန်ဖြစ်တဲ့နှစ်တွေ ၊ စီးပွားရေး ကသောင်းကနင်းဖြစ်တဲ့ နှစ်တွေကို ပြန်လေ့လာ ကြည့်ရင် “အင်္ဂါ နဲ့ စနေ” သက္ခတ် မှာဘဲ များပါတယ်။
အခုလည်း (၀)ကြွင်းသမားဖြစ်တဲ့ “ပက်ထရစ် ဆွေဇီ” ဟာ “အင်္ဂါသက္ခတ်” ထဲမှာ ကွယ်လွန်သွားရရှာပါပြီး။ ဒါကြောင့် “မဟာဘုတ် နဲ့ သက္ခတ်” ပညာဟာ ရိုးရှင်းပေမယ့် အမှန်များတယ်။ တိုက်ဆိုင်မှုများတယ်။ မှန်ကန်မှုအရာမှာ “နက္ခတ်ဗေဒင်” ပညာကြီးတွေထက် အောက်မကျဘူးဆိုတာကို ဒီဆောင်းပါးလေးနဲ့ သက်သေပြလိုက်ပါတယ်။ “ပက်ထရစ် ဆွေဇီ” တစ်ယောက် “Ghost” ဇာတ်ကားထဲကလိုဘဲ မြင့်မြတ်တဲ့ ကောင်းကင်ဘုံနန်းကို ရောက်ရှိနိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်း ပေးလိုက် ပါတယ်။ အားလုံးကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေသော်။
Posted in နာမက္ခရဗေဒ, မဟာဘုတ် | Tagged mahabote, Myanmar Astrology, အကြွေစောတဲ့ “ပက်ထရစ် ဆွေဇီ”, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် |3Comments	# သင့်နာမည် ပက္ခတ်လွတ်ရဲ့လား ?Published September 9, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	“မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် နှင့် နာမည်ပက္ခတ်မိခြင်း” Click ဆောင်းပါးမှာ နာမည် ပက္ခတ်မိခြင်း အကြောင်းကို ပဏာမ ဖော်ပြခဲ့ဘူးပြီး ဆက်ရေးဖို့ ကျန်နေပါတယ်။ နာမည်ပေး ဗေဒင်ပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် လေ့လာခဲ့တဲ့ သက်တမ်း တစ်လျှောက်မှာ ပက္ခတ် မိခြင်းဟာ ကျန်တဲ့ နာမည် အမှားတွေထက် ဆိုးကျိုး အလွန်ပေးနိုင်တာကို သတိထား မိလာ ခဲ့ပါတယ်။
“ပက္ခတ်”သို့မဟုတ် “ပက္ခ”ဆိုတာ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ခြင်း အဓိပ္ပါယ်ကို ဆိုလိုပါတယ်။ နာမည် တစ်ခုရဲ့ ရှေ့ဆုံး နေ့နံ နဲ့ နောက်ဆုံး နေ့နံဟာ “ပက္ခတ်” မိနေတယ်ဆိုရင် ဘဝတစ်ချိန်ချိန်မှာ -
ဥပစ္ဆေဒကကံနဲ့ ကွယ်လွန်သွားရတဲ့ သူတွေ အတော်များ များရဲ့ နာမည်မှာ “ပက္ခတ်” မိနေတာကို အထင်အရှား တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မီးကြီးကို မွှေးခဲ့တဲ ဂျာမဏီအာဏာရှင် ဟစ်တလာ၊ မြန်မာနိုင်ငံက အာဇာနည် ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ အိန္ဒိယ နိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး မဟတ္တမဂန္ဒီ နဲ့ အင်္ဂလန် ဝေလမင်းသမီး ဒိုင်ယာနာ ၊ မိကျောင်းမုဆိုး စတိအာဝင်၊ ဘင်နာဇီယာဘူတို တို့ ပါဝင်နေပါတယ်။ “မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့ ဆောင်းပါး” ထဲမှာလည်း ကမ္ဘာပေါ်က ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူများထဲမှာ နာမည် ပက္ခတ်မိသူများကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ အခြား နာမည် မဖော်ပြလိုတဲ့ ကျော်ကြားသူ အများအပြားလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ ပက္ခတ်အကြောင်း ရေးရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျမ်းတစောင် ပေတစ်ဖွဲ့ ဖြစ်လောက်တာမို့ လိုရင်းကိုဘဲဆက်ပြောပါမယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုနာမည်တွေဟာ “ပက္ခတ်” မိနေ တဲ့နာမည်တွေလည်း ဆိုတာ စစ်ဆေး ကြည့်ကြ ရအောင်။
ဒါကတော့ (၁)ကြွင်း မဟာဘုတ်ခွင် ဖြစ်ပါတယ်
ကိုယ်မွေးတဲ့ ခုနှစ်ဟာ (၁)ကြွင်းဖြစ်နေရင် ဒီမဟာဘုတ်ခွင်နဲ့ သက်ဆိုင် ပါတယ်။ ၁= တနင်္ဂနွေ , ၂= တနင်္လာ , ၃ = အင်္ဂါ , ၄ = ဗုဒ္ဓဟူး , ၅ = ကြာသပတေး , ၆ = သောကြာ , ၀ = စနေ ဆိုတာတော့ သိကြတယ်မဟုတ်လား။ မသိသေးရင် မှတ်ထားပါ။ အဲဒီ (၁)ကြွင်းမဟာဘုတ်မှာမွေးတဲ့ သူတစ်ဦးရဲ့ နာမည်ဟာ -
ဒါကတော့ (၂)ကြွင်း မဟာဘုတ်ခွင် ဖြစ်ပါတယ်
ကိုယ်မွေးတဲ့ ခုနှစ်ဟာ (၂)ကြွင်းဖြစ်နေရင် ဒီမဟာဘုတ်ခွင်နဲ့ သက်ဆိုင် ပါတယ်။ အဲဒီ (၂)ကြွင်းမဟာဘုတ်မှာမွေးတဲ့ သူတစ်ဦးရဲ့ နာမည်ဟာ -
ဒါကတော့ (၃)ကြွင်း မဟာဘုတ်ခွင် ဖြစ်ပါတယ်
ကိုယ်မွေးတဲ့ ခုနှစ်ဟာ (၃)ကြွင်းဖြစ်နေရင် ဒီမဟာဘုတ်ခွင်နဲ့ သက်ဆိုင် ပါတယ်။ အဲဒီ (၃)ကြွင်းမဟာဘုတ်မှာမွေးတဲ့ သူတစ်ဦးရဲ့ နာမည်ဟာ -
ဒါကတော့ (၄)ကြွင်း မဟာဘုတ်ခွင် ဖြစ်ပါတယ်
ကိုယ်မွေးတဲ့ ခုနှစ်ဟာ (၄)ကြွင်းဖြစ်နေရင် ဒီမဟာဘုတ်ခွင်နဲ့ သက်ဆိုင် ပါတယ်။ အဲဒီ (၄)ကြွင်းမဟာဘုတ်မှာမွေးတဲ့ သူတစ်ဦးရဲ့ နာမည်ဟာ -
ဒါကတော့ (၅)ကြွင်း မဟာဘုတ်ခွင် ဖြစ်ပါတယ်
ကိုယ်မွေးတဲ့ ခုနှစ်ဟာ (၅)ကြွင်းဖြစ်နေရင် ဒီမဟာဘုတ်ခွင်နဲ့ သက်ဆိုင် ပါတယ်။ အဲဒီ (၅)ကြွင်းမဟာဘုတ်မှာမွေးတဲ့ သူတစ်ဦးရဲ့ နာမည်ဟာ -
ဒါကတော့ (၆)ကြွင်း မဟာဘုတ်ခွင် ဖြစ်ပါတယ်
ကိုယ်မွေးတဲ့ ခုနှစ်ဟာ (၆)ကြွင်းဖြစ်နေရင် ဒီမဟာဘုတ်ခွင်နဲ့ သက်ဆိုင် ပါတယ်။ အဲဒီ (၆)ကြွင်းမဟာဘုတ်မှာမွေးတဲ့ သူတစ်ဦးရဲ့ နာမည်ဟာ -
ဒါကတော့ (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ်ခွင် ဖြစ်ပါတယ်
ကိုယ်မွေးတဲ့ ခုနှစ်ဟာ (၀)ကြွင်းဖြစ်နေရင် ဒီမဟာဘုတ်ခွင်နဲ့ သက်ဆိုင် ပါတယ်။ အဲဒီ (၀)ကြွင်းမဟာဘုတ်မှာမွေးတဲ့ သူတစ်ဦးရဲ့ နာမည်ဟာ -
Posted in နာမက္ခရဗေဒ, မဟာဘုတ် | Tagged mahabote, Myanmar Astrology, ပက္ခတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 24 Comments	# Pop ဘုရင်ကြီး မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် နှင့် နာမည်ပက္ခတ်မိခြင်းPublished June 26, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in နာမက္ခရဗေဒ, မဟာဘုတ် | Tagged mahaboke, Myanmar Astrology, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 1 Comment	# နာမည်အကြောင်း သိကောင်းစရာများPublished October 12, 2008 | By Dr.Tin Bo Bo	.
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိလူအများသုံးစွဲနေကြတဲ့ နာမည်ပေးပုံကတော့ “နေ့နံအပေါ် အခြေခံတဲ့ နာမည်ပေးနည်း” ဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေ သားသမီးဆိုရင် တနင်္ဂနွေနံ ဖြစ်တဲ့ (အ၊ဥ) နဲ့ပေးမယ်။ တနင်္လာ သားသမီး ဆိုရင် တနင်္လာနံဖြစ်တဲ့ (က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊င) တွေနဲ့ ပေးမယ်။ အင်္ဂါသားသမီး ဆိုရင်လည်း (စ၊ဆ၊ဇ၊ဈ၊ည) နဲ့ ပေးမယ်ပေါ့။ .
ဒီလိုဘဲ လွယ်လွယ်ပေးလိုက်ကြပါတယ်။ ဒီလို နေ့နံအတိုင်း ပေးလိုက်တာ ကိုဘဲ ကလေးအတွက် လုံလောက်သွားကြပြီလို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ အဖေ နာမည်၊ အမေနာမည်၊ အဖိုးအဖွားနာမည် တွေပါမကျန် နာမည်ထဲမှာထည့်ပြီး မှည့်လိုက် ကြပါသေးတယ်။
ဘယ်ဗေဒင်ဆရာဆီကိုမှ သွားမနေကြတော့ပါဘူး။ သွားပြန်တော့လည်း စိတ်တိုင်း ကျလှတယ် မရှိပါဘူး။ ဗေဒင်ဆရာတွေပေးတဲ့ နာမည်တွေဆိုတာ ကလည်း ခေတ်နဲ့ မဆီလျော်လှတဲ့ နာမည်တွေ၊ ခပ်တုံးတုံးတွေက များတယ် မဟုတ်လား။
ဒီတော့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်အတိုင်း နေ့နံပေါ်မှာ အခြေခံပြီး နောက်ဆုံးပေါ် လှပေ့၊ ဆန်းပေ့၊ ညွန့်ပေ့ဆိုတဲ့ နာမည်မျိုးတွေကို ပေးချလိုက်တော့တာပါဘဲ။ ငါ့သားသမီးနာမည်ကို ဘယ်သူနဲ့မှ မတူစေရဘူးဆိုတဲ့ မိဘတွေ ကလည်းအများသားလား။
ဒီလို အလွန်ထူးဆန်းတဲ့ နာမည်တွေကို မှည့်ထားပြီး ထူးထူးချွန်ချွန် ဖြစ်လာသူတွေကို အလွန် တွေ့ရခဲလှပါတယ်။ လေ့လာ ကြည့်မယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့၊ ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တော်တော်များများရဲ့ နာမည်တွေဟာ ခပ်ရိုးရိုးတွေဘဲဖြစ်နေတာကို သတိထားမိကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ်ရိုးစင်းနေလွန်းပြန်ရင်လည်း ခေတ်ရေစီးကြောင်းက ပြောင်းလဲလာတဲ့ အချိန်မှာ ခေတ်နဲ့ မဆီလျော်တာမျိုးလည်း မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့။
Posted in နာမက္ခရဗေဒ, မဟာဘုတ် | Tagged mahaboke, mahabote, Myanmar Astrology, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	Reports to my Friends !
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,344)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,951)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,413)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,275)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,354)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,521)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,549)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,911)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,265)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,260)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,080)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,046)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,805)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,743)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,293)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,107)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,828)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,461)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,181)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,120)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,822)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,674)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,538)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,423)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,249)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,212)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,883)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,662)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,468)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,003)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !